शुरुआतीहरूको लागि व्यवसाय सुरू गर्दै - T युक्तिहरू तपाईंलाई आवश्यक छ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
अप्रिल 15, 2021 अप्रिल 13, 2021 सियरा पावेल अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, gigs, बिक्रीको लागि Gigs, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, साइड Gigs, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
राम्रो बजार अनुसन्धानको साथ, तपाईं तपाईंको लक्ष्य बजारको आवश्यकता र प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ।
धेरै ब्यापारहरू फिर्ता आउँछ जब सम्म व्यापार समर्थन गर्न को कमी को कारण असफल।
नगदीको रकम निर्धारित गर्न ब्रेक-इभन सूत्र प्रयोग गर्नुहोस्।
बजार अनुसन्धान लक्षित क्षेत्रमा सम्भावित ग्राहकहरूको संख्या पहिचान गर्न उत्तम तरिका हो। तपाईं एसईओ मा अनुसन्धान मार्फत बजार अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ, फोकस समूहहरू, सर्वेक्षणहरू, र सार्वजनिक डाटा होल्डिंग। एक शोध बजार सञ्चालनले बजारमा सीमितता र अवसरहरू औंल्याउँदै प्रतिस्पर्धाको स्तर बुझ्न यसलाई सजिलो बनाउँदछ।
व्यवसायमा सफल हुने सब भन्दा सजिलो चाल भनेको समस्याको पहिचान गर्नु हो र ग्राहकहरूको समाधान गर्नु हो।
राम्रो बजार अनुसन्धानको साथ, तपाईं तपाईंको लक्ष्य बजारको आवश्यकता र प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँको लक्ष्य थाहा पाएर, यो प्रतिस्पर्धी वातावरण अनुकूल गर्न को लागी सजीलो छ। यसका साथै, अनुसन्धानले तपाईंलाई चुनौतीहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने र तपाइँको व्यवसाय कसरी कायम राख्न आवश्यक छ भनेर सिकाउँदछ। चीजहरू दक्षिणमा जाँदा बाहिर निस्कन योजना गर्न नबिर्सनुहोस्।
२. पर्याप्त वित्तीय प्राप्त गर्नुहोस्
एक सफल र राम्रो व्यापार को लागी, तपाईलाई आवश्यक वित्त प्राप्त गर्नु पर्छ। धेरै ब्यापारहरू फिर्ता आउँछ जब सम्म व्यापार समर्थन गर्न को कमी को कारण असफल। शुरुका केही महिना व्यापारमा निर्भर नहुनुहोस्। तपाईले व्यवसाय सुरु गर्नु पर्ने पूँजीको मात्रालाई बढाइमा पार्नु यो सल्लाह दिइन्छ। तल एक सूत्र छ जुन तपाइँलाई तपाइँको वित्तीय मा योजना बनाउन सहयोग गर्दछ।
वित्तीय विश्लेषण गर्नुहोस्
नगद राशि निर्धारित गर्न, प्रयोग गर्नुहोस् ब्रेक-इयर सुत्र। वित्त योजना फार्मूलाले तपाईंलाई पूर्वानुमान गर्न मद्दत गर्दछ जब उत्पादन र सेवाहरू नाफाको लागि शुरू हुन्छन्। यो विधि प्रयोग गरेर, तपाईं न्यूनतम प्रदर्शन थाहा पाउनुहुनेछ र घाटा बनाउनबाट बच्नुहुनेछ।
किन तपाईंले ब्रेक-इमान फार्मूला प्रयोग गर्नु आवश्यक छ भन्ने कारणले गर्दा तपाईं:
लाभ वा लाभ पाउन तपाईंले बेच्न आवश्यक चीजहरूको संख्या वा सेवाहरूको स know्ख्या जान्नुहोस्।
उत्पादन लागत गणना गर्नुहोस्, जस्तै श्रम, खर्च, वा सामानको लागत यसको मूल्य निर्धारण गर्न।
लाभ उठाउने र नाफा रेकर्ड गर्नु पर्ने राजस्व गणना गरेर तपाईंले अपेक्षा गरेको नाफाको विश्लेषण गर्न पाउनुहोस्।
तपाईं आफ्नो कोष कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ
नयाँ व्यवसायको रूपमा, त्यहाँ धेरै तरीकाले तपाईं आफ्नो वित्तीय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, समावेश सहित:
परिवार र साथीहरूको सहयोग।
बजार अनुसन्धान लक्षित क्षेत्रमा सम्भावित ग्राहकहरूको संख्या पहिचान गर्न उत्तम तरिका हो।
Lawyers. वकिलहरुबाट सहयोग
एक सफल व्यवसायका लागि, एक व्यवसाय गठन वकील। व्यापारको प्रकृति जस्तोसुकै भए पनि, तपाईंलाई मद्दत गर्नका लागि एक वकीलको आवश्यक पर्दछ:
दायित्व- एक व्यक्तिगत दायित्व जोखिममा तपाईले स्वामित्व राख्नु भएको केही चीज राख्न सक्दछ। एक जोखिम कम गर्न वा बचाउन एक वकील प्राप्त गर्नुहोस्।
ट्रेडमार्क रेजिष्ट्रेसन- यदि तपाईंले एक अद्वितीय ब्रान्ड सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुभयो भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले ब्रान्डको रक्षा गर्न सही विधि प्रयोग गर्नुभयो। A व्यवसाय गठन वकील तपाईंलाई ट्रेडमार्क दर्ता गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रतिलिपि अधिकार रेजिष्ट्रेसन- यदि तपाईं सामग्री सिर्जनाकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो सामग्री प्रतिलिपि अधिकार दर्ता गर्न आवश्यक छ।
Sol. समाधान प्रदान गर्नुहोस् वा मार्केट गैप लिनुहोस्
व्यवसायमा सफल हुने सब भन्दा सजिलो चाल भनेको समस्याको पहिचान गर्नु हो र ग्राहकहरूको समाधान गर्नु हो। समाधान प्रस्ताव गरेर, यो व्यापार मा एक को लागी हाबिल गर्न सजिलो छ र कम प्रतिस्पर्धा छ। तपाईं मार्केट अन्तरलाई पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ:
ग्राहकहरु बाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दै (बजार अनुसन्धान)।
अन्य देशहरू / क्षेत्रहरूमा उपलब्ध व्यवसाय विचार खरीद गर्दा, तर तिनीहरू तपाईंको क्षेत्रमा अनुपस्थित छन्।
तपाइँका प्रतियोगीहरूबाट बिभिन्न उत्पादनहरू प्रदान गर्दै।
व्यवसाय को खोज अनुसन्धान गर्न एक पेशेवर भर्ती।
Marketing. व्यापार मार्केटिंग
नयाँ व्यवसायको रूपमा तपाईका ग्राहकहरूलाई तपाईको अस्तित्व थाहा छैन। एक मार्केटिंग रणनीति प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईंको उत्पादन र सेवाहरू बेच्नुहोस्। साथै, तपाईंले उत्पादन र सेवाहरू र मार्केटको बारेमा जानकारी समावेश गर्नुपर्दा एक च्यानल प्रयोग गरेर तपाईंको लक्षित ग्राहकहरूलाई पुग्छ। सब भन्दा सजिलो तरीका सामाजिक मिडिया मार्फत हो।
व्यापार सुरू गर्नु तनावपूर्ण हुनुपर्दैन। एक सफल व्यवसाय सुरू गर्न मद्दतको लागि माथि केही तरिकाहरू छन्। व्यापार सुरु गर्नु अघि बजार अनुसन्धान गर्नु भनेको नयाँ व्यवसायको लागि मुख्य चाल हो।
चित्रित छवि स्रोत: Pexels.com राम्रो बजार अनुसन्धानको साथ, तपाईं आफ्नो लक्ष्य बजारको आवश्यकता र प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ।
व्यापार सांप्रदायिक समाचार मार्केटिङ
यहाँ केहि मानिसहरु लाई आफ्नो आर्थिक प्रभाव भुक्तानहरु को बारे मा एक सूचना भन्दा बढी प्राप्त भयो